Yimalini ongayenza ngeGoogle AdSense? - Learn Expert Blogging
Yimalini ongayenza ngeGoogle AdSense?
Ungathola noma yini kalula kusuka ku- 50 Amadola ukuze 1000+ dollar ngosuku kusuka ku-Google AdSense. Ukufeza le nhloso noma ngaphezulu, kufanele ube nomthamo wekhwalithi ngokusetshenziswa kwamasu okufanele.
Njengoba iGoogle AdSense ingumkhiqizo weGoogle. Izikhangiso eziningi ezenziwa ngabadayisi abayizigidi ezingama-dollar ku-inthanethi nge-google. Bakhokhela iGoogle ngezikhangiso ukuze zilethe izinsizakalo emphakathini.
I-Google ivumela abashicileli ukuthi babonise izikhangiso kuwebhusayithi yabo futhi ngokubuyisela i-Google kanye nomnikazi wewebhusayithi bathola imali lapho othile echofoza isikhangiso.
Kunezigidi zamawebhusayithi kwi-intanethi. Kuzo, abaningi banezivakashi ezinhle zansuku zonke.
Lapha iGoogle isebenza njengomaphakathi. Uma une-platform oziphathela yona njenge-WordPress, i 30% ingxenye yemali engenayo iya ku-Google, nabanye 70% ingeyakho.
Ngokolunye uhlangothi, uma usebenzisa ipulatifomu le-Google elibloga blogger.com, kulokhu i-Google igcina 40%.
Awukho umthetho onzima futhi osheshayo wokuthi ngemuva kokuvakashelwa kangaki kuwebhusayithi yakho, imali ongayithola nge-AdSense? Ithembele ngokuphelele ekutheni ubhala hlobo luni lwesihloko.
Ukwenza kucace kakhudlwana, ngokuvamile, amagama ahlobene nesayensi yezokwelapha abiza kakhulu ngokuchofoza ngakunye. Kuqala ngo- 1 uku 2 dollars futhi ihamba kalula 50 amadola ngokuchofoza ngakunye. Lokhu kusho ukuthi ezinye izivakashi zivakashela iwebhusayithi yakho, funda i-athikili yakho bese uqhafaza kwisikhangiso ukuthola insizakalo, uzoba nayo 70% we-CPC ephelele, nabasele 30% iphaketheni le-Google.
Ngokwesibonelo, Ubone abantu abaningi besesha ku-inthanethi “ukwelashwa kokufakelwa izinwele”. Uma ubhala i-athikili ngalesi sihloko esithile. Uzothola i-CPC ihamba kalula 7 uku 10 amadola ngokuchofoza ngakunye. Uma uthola inombolo enhle yokuchofoza kuzivakashi, ungenza kalula uzungeze $50 ngosuku.
Ngokolunye uhlangothi, ukwabelana ngolwazi lwami, lapho ngiqala uhambo lwami lokuqala ngingenalo ulwazi, Ngiyakhumbula ukuthi kwakuyinhlekelele enkulu kunazo zonke. The reason because I wrote articles on the topic with no CPC. Abathengisi bebengakhokheleli igama elingukhiye engilibhalele ukukhomba izethameli. Kwakumayelana nezinkondlo zendawo. Impela uyahleka ngalesi sikhathi. Ngokuyisisekelo nginolwazi oluhle ngayo kepha bekungasizi ngalutho uma ungaguquli lokhu kube yimali enhle.
Ngabhala cishe 50 izindatshana ezihlanganisiwe kamuva zithole ukuthi angikhiqizi imali engaphezu kuka 5 amadola ngenyanga. Ukudumazeka kwakungokoqobo. Kungenxa yokuthi bengingazi ukuthi udinga ukuthi unakekele ukuthi igama elingukhiye likukhokhela malini. Uma kungelutho, lapho-ke kufanele ushiye lelo gama elingukhiye ngoba alilethi imali enhle kwaGoogle AdSense.
Mina uqobo ngiphakamisa kokuhlangenwe nakho kwami, kufanele ubheke igama elingukhiye le-CPC ngaphambi kokubhala i-athikili. Iya ocwaningweni lwegama elingukhiye kufanele ube nolwazi oluningi lokubhala 100 + ngokuqinile. uma uqala isihloko kepha ungenalo ulwazi oluningi kusho ukuthi usheshe uphele.
Kumele Ufunde: Ungayakha kanjani iwebhusayithi ye-Blog engathola imali enhle
Ababhali bewebhusayithi noma bebhulogi abanendaba nesivinini sewebhusayithi. Kuyiphutha labo. Kufanele bazi ukuthi ijubane lewebhusayithi libaluleke kakhulu ngenkathi behola imali kwiGoogle AdSense.
I-Google AdSense ikusiza ukuthi uthole imali ngokubonisa amabhanela wesayizi ahlukile kuwebhusayithi yakho. Luhlobo lwekhodi olusemuva kuwebhusayithi lapho othile evakashela iwebhusayithi yakho. Ikhodi yeskripthi isebenza njalo futhi inciphisa isikhathi sokuvula iwebhusayithi.
Ngokuvamile, isikhathi kufanele sibe ngaphakathi 2 uku 3 imizuzwana kepha uma ufaka ikhodi yeskripthi, okwenzekayo kuqala ukuthatha 10 uku 15 imizuzwana ukuvula iwebhusayithi. Ngaleso sikhathi, umsebenzisi akafuni ukuhlala isikhathi eside. Bacindezela inkinobho yokubuyela emuva, buyela emuva, bese uthuthela kwenye iwebhusayithi.
Ngemuva kwalokho, Ungayenza kanjani imali? uma izivakashi zingavakasheli iwebhusayithi yakho. Ababoni lutho esikhathini esilinganiselwe. Lokhu impela ukulahleka kwemali engenayo ngeGoogle AdSense.
Kwalokhu, udinga ukusingathwa okulayisha ngokushesha, lokho kunempendulo enhle yeseva. Kulezi zinsuku IBluehost inikeza insizakalo enhle kakhulu. Hhayi lokhu kuphela kodwa futhi, banikela ngezinto ezingeziwe njenge Isitifiketi se-SSL nokuningi okubamba iqhaza elibalulekile ekulinganisweni kweGoogle namuhla nasesikhathini esizayo.
Previous PostIngabe Kunzima Ukwenza Imali Ngokumaketha Okuhlangene?
Next PostNgabe ungamaketha kokuhambisana ne-AdSense?
Ingabe Isitshudeni Singathola Imali Ku-inthanethi?
Ungakanani imali ongayenza nge-WordPress Blog?